Waa sidee Caawa xaalada deegaanadii lagu dagaalamey ee Mudug? - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Waa sidee Caawa xaalada deegaanadii lagu dagaalamey ee Mudug?
Waa sidee Caawa xaalada deegaanadii lagu dagaalamey ee Mudug?
Waxaa Caawa xaalad deganaansho ah laga dareemayaa deegaano ka tirsan Bariga Gobolka Mudug gaar ahaan deegaano hoostaga degmada Towfiiq,halkaas oo Maanta ay ku dagaalameen laba maleeshiyo Beeleed.
Dagaalkii Maanta ayaa la sheegay in uu sababay dhimashada in ka badan 20 Ruux iyo dhaawaca tiro intaasi ka badan oo labada dhinac ah,waxaana jiray barakac ay sameeyeen dadka deegaanka lagu dagaalamay.
Labada maleeshiyo beeleed oo dagaalkoodu uu yahay mid soo laab laabtay ayaa waxaa ay isku heystaan dhul halkaasi ku yaalla,waxaana khamiistii la soo dhaafay oo uu bilaawday dagaalka ka dhashay khasaaro xoogan.
Qaar kamid ah dadka ku nool deegaannada lagu dagaalamay oo kala hoostaga degmooyinka Afbarwaaqo iyo Towfiiq ee Gobolka Mudug ayaa waxaa ay sheegeen inay weli cabsi dareemayaan maadaama maleeshiyaadkii dagaalamay ay ishor-fadhiyaan.
Dowladda Soomaaliya,Maamulada Puntland,Galmudug,Siyaasiyiin, Xildhibaano iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada Soomaaliyeed ayaa si isku mid ah waxaa ay ugu baaqeen in dagaalka la joojiyo,isla markaana miiska wada-hadalka wax walba lagu dhameeyo.
Previous articleXaaf oo la kulmay Wakiilada QM & Midowga Afrika
Next articleCiidamada Jubbaland oo Gacanta ku dhigey Nin dil geystay